Kooxda Ascott Sun: Iskaashi Cusub - iyo waxa ay ka dhigan tahay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Ogeysiisyada Saxaafadda » Kooxda Ascott Sun: Iskaashi Cusub - iyo waxa ay ka dhigan tahay
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Ogeysiisyada Saxaafadda • Wararka Jabinta Vietnam
Ma laguugu sheegay war -saxaafadeedkaan, mise waxaad haysaa faahfaahin dheeraad ah oo aad ku darto?
Ascott wuxuu maamuli doonaa 1,905 unug oo ku kala yaal saddex summadood oo adeeg oo kala duwan oo ku dhex yaal Sun Group's Tay Ho View Complex ee Hanoi. Horumarka isku -dhafan ee hal -abuurka leh ayaa noqon doona astaanta cusub ee Vietnam, oo beddeli doonta cirka magaalada iyo dib -u -soo -noolaynta degmada gaarka ah ee Tay Tay. Ascott wuxuu soo bandhigi doonaa astaanta ururinta Crest ee Vietnam. Waqtigan xaadirka ah oo kaliya ayaa laga heli karaa Faransiiska, tani waa markii ugu horreysay ee Ururinta Crest ay ka soo muuqan doonto Aasiya, iyada oo martida siin doonta waayo -aragnimo raaxo gaar ah iyada oo loo marayo isku -darka dabeecadda iyo hiddaha. Ascott ayaa sidoo kale soo bandhigi doonta saxiixeeda Ascott The Residence astaanta iyo sidoo kale sumcaddeeda ugu dhaqsaha badan, Citadines Aparthotel. Ascott Residence wuxuu siiyaa martida garashada leh waayo -aragnimo gaar ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed halka Citadines Aparthotel ay bixiso dabacsanaanta iyo wax ku oolnimada guri dabaq ah oo leh adeegyo huteel iyo sidoo kale waayo -aragnimo maxali ah. Saddexda guri ee adeegga leh ayaa la filayaa inay furmaan wejiyada laga bilaabo 1Q 2023.
Xafladdii saxiixa ee dhex martay Ascott iyo Sun Group, Mr Kevin Goh, Madaxa Fulinta CLI ee Lodging ayaa yiri: “Samaynta iskaashiyo istiraatiiji ah oo lala yeesho ciyaartooyda hormoodka u ah warshaduhu waxay sii ahaanaysaa istaraatijiyad kobcin oo muhiim u ah Ascott. Waxay na siisaa marin -u -helis dhuun -mareen ah oo ah mashaariic tayo leh si aan u kobcinno faylalkayaga caalamiga ah iyo dakhliga soo noqnoqda ee ujrada marka ay furaan oo xasilinayaan. Tani waxay la jaanqaadaysaa istiraatiijiyadda iftiinka hantida ee CLI. Iskaashiga istiraatiijiyadeed ee Ascott iyo Sun Group si ay u maareeyaan horumarinta degganaanshaha ugu weyn ee Fiyatnaam oo leh saddex ka mid ah sumadahayaga, waxay muujineysaa kalsoonidooda ku aaddan khibradda caalamiga ah ee Ascott iyo sumcadda sumcadda. Mashruucu wuxuu noqon doonaa astaan ​​muujinaysa awoodda soo dhaweynta Ascott. Wadajir ahaan, waxaan sugeynaa inaan soo bandhigno nalka qaab -dhismeedka cusub ee Fiyatnaam, oo soo jiita martida maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah si ay noo helaan gurigooda oo ka fog guriga. Iskaashigayaga istiraatiijiyadeed ayaa sidoo kale u gogol xaaraya Ascott si uu ugala shaqeeyo mashaariic hoy oo dheeraad ah mustaqbalka Kooxda Sun. ”
Ms Nguyen Vu Quynh Anh, Maamulaha, Sun Hospitality Group (SHG), sumcadda martigelinta Sun Group, ayaa tiri: “Sun Group iyo SHG waxay ku faraxsan yihiin inay iska kaashadaan Ascott, oo ah mid ka mid ah shirkadaha hoyga ugu horeeya adduunka, si loo gaaro himiladeenna Tay Ho View Kakan Asagoo hormuud u ah warshadaha degenaanshaha ee Aasiya Pacific, sumcadda iyo shabakadda caalamiga ah ee Ascott ayaa aad ugu habboon mashruucayaga heer caalami ah. Iyada oo leh Kooxda Sun iyo waayo-aragnimada SHG in badan oo ka mid ah mashaariicda heerka-sare ah ee Vietnam sida InterContinental Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole-MGallery (Sa Pa), iwm. , waxaan ku kalsoonahay in Tay Ho View Complex uu noqon doono astaantii ugu dambeysay ee qaab dhismeedka dalka si loo soo jiito dareenka qof walba. Tay Ho View Complex ayaa lagu wadaa inay dib u qeexdo heerarka martigelinta ee magaalada. Intaas waxaa sii dheer, mashruucu wuxuu sidoo kale sii hurin doonaa koboca dhaqaalaha Hanoi oo sii socda, isagoo u soo jiidaya ganacsatada iyo waqtiga firaaqada magaalada sidoo kale wuxuu bulshada siinayaa fursado shaqo oo macno leh. ”
Joogitaanka Ascott ee Tay Ho View Complex, oo ah astaanta naqshadda cusub ee Hanoi
Dhismaha Tay Ho View wuxuu ku yaal mid ka mid ah degmooyinka Hanoi ee gaarka ah wuxuuna ku yaal meel u dhow West Lake ee caanka ah. Ka sokow saddexda Ascott ee guryaha la adeego, horumarka isku dhafan wuxuu kaloo ka kooban yahay qaybaha ganacsiga iyo tafaariiqda. Tay Ho View Complex waxaa ku hareereysan safaarado badan, meherado, maqaayado iyo xulashooyinka tafaariiqda. Waxay sidoo kale ku xigi doontaa Opera House soo socda oo la furi doono mustaqbalka. Degmooyinka ganacsiga dhexe ee Hanoi ee Hoan Kiem, My Dinh iyo Ba Dinh, iyo sidoo kale Madaarka Caalamiga ah ee Noi Bai ayaa dhamaantood u jira 20 daqiiqo oo baabuur ah.
Ascott Residence wuxuu bixin doonaa 1,167 unug oo ka kooban suuliyo, istuudiyaha, hal ilaa afar qol jiif ah iyo unugyo duplex ah, halka Citadines Apart'hotel ay bixin doonto 710 unug oo ka kooban istuudiyaha, hal ilaa afar qol jiif ah iyo qaybo laba dabaq ah. Ururinta Crest waxay bixin doontaa 28 unug oo gaar ah, oo ka kooban saddex iyo afar qol oo dabaq ah. Xarumaha ku yaal saddexda guri waxaa ka mid ah sariirta dadka deggan, qolka akhriska, iyo jimicsiyada. Deganayaashu waxay sidoo kale heli doonaan maqaayado heer sare ah Michelin-xiddig leh ama kuugga caanka ka ah adduunka oo martida ku soo biiriya quudka cuntada. Waxa kale oo jiri doona naadi iyo bar samada oo ku taal koritaanka isku dhafan ee martida si ay u nastaan ​​ka dib maalin dheer cabitaannada saxeexa baarka.
Joogitaanka Ascott ee Vietnam
Ascott ayaa markii ugu horreysay ku soo biirtay Vietnam 27 sano ka hor markii la furay Somerset West Lake Hanoi. Maanta, Ascott waa milkiilaha ugu weyn ee milkiilaha hoyga ee dalka. Iyada oo lagu daray saddexda degaan ee adeegga leh, faylka Ascott ee Vietnam wuxuu ka kooban yahay 9,200 unug oo hoy ah in ka badan 30 guri oo ku yaal 12 magaalo sida Binh Duong, Cam Ranh, Danang, Hai Phong, Halong, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hoi An, Lao Cai, Nha Trang, Sa Pa iyo Vung Tau. Bishii Juun 2021, sanduuqa khaaska ah ee Ascott, Ascott Serviced Residence Global Fund, wuxuu helay 364-qaybood Somerset Metropolitan West Hanoi oo la qorsheeyay in la furo 2024.